လူမနေသော ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်ရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်သို့ ဘင်္ဂါလီ တစ်သိန်းပို့ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ?? - Yangon Media Group
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိ လူမနေသော Bhasan Char ရွှံ့ထူသည့်ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေးလာသော ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်တစ်သိန်းခန့်ကို ရွှေ့ပြောင်းအခြေချရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရက မိုးမကျမီ အပူတပြင်းစီစဉ်နေလျက်ရှိသည်ဟု ဖေဖော် ဝါရီ ၂၂ ရက်က ရိုက်တာသတင်းကဆိုသည်။အဆိုပါမြေနိမ့်ကျွန်းပေါ်၌ ဘင်္ဂါလီများကိုထားမည်ဆိုသည့်နေရာမှာ ကော့ဘဇားရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် လူပြည့်ကျပ်နေမှု သက်သာစေရေးအတွက် ယာယီအစီအစဉ်တစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟု ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာဆီနာက ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာဆီနာ၏ အကြံပေးတစ်ဦးကမူ ဘင်္ဂါလီများအ နေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လျှင်ပြန်၊ တတိယနိုင်ငံတစ်ခုတွင် ခိုလှုံခွင့်ရလျှင်ရ သို့မဟုတ်ပါက ထိုကျွန်းမှ စွန့်ခွာခွင့်ရမည် မဟုတ်ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောသည်။ ”အဲဒီကျွန်းဟာ ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း မဟုတ်ပေမယ့် ကန့်သတ်ချက်တချို့တော့ ရှိလိမ့်မယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ မှတ်ပုံတင် ID ကတ်လည်း ပေးမှာမဟုတ်ဘူး”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်၏အကြံပေး H.T. Imam က ပြောသည်။ ထိုကျွန်းပေါ်တွင် လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်အား ၄ဝ၊ ၅ဝ ခန့် တာဝန်ချထားမည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
လာမည့်ဧပြီလ မုတ်သုံမိုးရာသီတွင် လက်ရှိဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်စခန်းများ၌ ရေကြီးနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဧပြီလမတိုင်မီ ကျွန်းပေါ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ရေးအတွက် ဗြိတိန်နှင့် တရုတ်အင်ဂျင်နီယာများကကူညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ကျွန်းပေါ်သို့ပို့မည့် ဒုက္ခသည်များကို မည်သို့မည်ပုံရွေးချယ်မည်ဆိုသည်အား မဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်း၊ သို့သော် မဲနှိုက် ခြင်း၊ သွားလိုသူများကိုစာရင်းကောက် ခြင်းတို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရှိကြောင်း အကြံပေး Imam က ပြောသည်။ ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံးကမူ ဒုက္ခသည်များကို အတင်းအကျပ်နေရာ မရွှေ့ပြောင်းသင့် ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ကို အခြေအနေများရှင်းပြ ပြီးမှသာ ဆုံးဖြတ်စေသင့်ကြောင်း ကြေ ညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
ဘင်္ဂါလီများကို အဆိုပါကျွန်းပေါ်သို့ပို့ရန် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုး ရစီစဉ်ခဲ့တုန်းကလည်း အကူအညီပေးရေး အေဂျင်စီများက ဝေဖန်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကျွန်းသည် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဒဏ်မကြာခဏခံရသလို လူများ ထောင်နှင့်ချီပြီးနေထိုင်ရန် မသင့်လျော်ဟု အကူအညီပေးရေး လုပ်သားများကပြောသည်။ Bhasan Char (ပေါလောပေါ်နေ သောကျွန်း)ဟုအမည်ရသည့် အဆိုပါကျွန်းသည် ပင်မကုန်းမြေနှင့် ၂၁ မိုင်ကွာ ဝေးသည်။ ကျွန်းပေါ်တွင် သွပ်မိုးကာ၊ ဆိုလာပြားများတပ်ဆင်ထားသော အုတ်စီအဆောက်အအုံ ၁၄၄ဝ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပြီး အဆောက်အအုံတစ်ခုတွင် မိသားစု ၁၆ စုနေထိုင်ရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အစိုးရကစီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။